CNC nijoro Service - Anebon Metal Products Co., Ltd.
Ao amin'ny Anebon, dia miasa isan-karazany ny fanjakana-avy-ny-kanto CNC mihaohao milina isan-karazany manolotra ny tolotra machining, anisan'izany ny fametrahana mazava tsara mihaohao. Mirehareha izahay manana fahaiza-manao CNC machining mba hiatrehana tetikasa rehetra habe. Amin'ny alalan'ny nijoro ireo milina, isika dia afaka manome fahaiza-manao ho an'ny indostria isan-karazany ny mpitondra ao an-tsena. Ny asa no manana fomba maro mihaohao CNC mihaohao milina, ary ny vokatra dia matetika ampiasaina ao amin'ny fiara, aerospace, fitsaboana, 5G fifandraisana, an-dranomasina, mpanjifa elektronika, ny angovo azo havaozina sy ny orinasa hafa.
Inona no dingana fanaraha-maso ny ordinatera isa fikosoham-bary?
CNC fikosoham-bary ny Rotary mampiasa fitaovana mitovy amin'ny fanapahana ary atsofony, afa-tsy ny fitaovana iray eny hetsika samihafa famaky mba hamorona endriny isan-karazany, anisan'izany ny lavaka sy ny slots. Izy io dia mahazatra endriky ny CNC machining satria manao ny asan'ny ary atsofony sy latheing. Izany no fomba tsotra indrindra fandavahana lavaka rehetra Premium karazana fitaovana mba hamokarana vokatra tsara noho ny raharaham-barotra.
Fikosoham-bary sy ny fametrahana mazava tsara ny rafitra mahomby CNC
Izahay ampela coolant famatsiana, dia afaka manapaka fitaovana haingana kokoa noho ny fitsipika coolant dipoavatra rafitra, ary ny CAD / CAM, ug sy Pro / e, 3D Max. dia afaka mifandray tsara kokoa amin'ny mpanjifa ara-teknika, ary indrindra hanafaingana ny dingana rehetra sy ny manome anareo vokatra avo mahomby. Ny roa mitsivalana CNC mihaohao foibe mampiseho mandeha ho azy no mamily knuckles izay mamela antsika ho milina na oviana na zoro. Miaraka amin 'ny fampiasana ny fitaovana boribory, izany dia mamela antsika mba hahatratra ny sarotra ihany rafitsary toy misy dimy mpiray milina.
5-mpiray CNC fahaiza fikosoham-bary
Rehefa nilaza fitsipika 5-mpiray milina, dia manondro ny isan'ny toromarika izay ny fanapahana fitaovana dia afaka mihetsika, fa rehefa setup ny taom-piotazam fitaovana mihetsika manerana ny X, Y sy Z Linear famaky sy mihodinkodina amin'ny A sy B famaky, niara fikosoham-bary sy ny machining, ary avo-kalitao ambonin'ny machined farany. Izany dia mamela ny sarotra sy be pitsiny ny faritra na ny ampahany mampiseho lafiny maro dia azo tsinjaraina hatramin'ny lafiny dimy ny anjara tamin'ny fanamboarana iray. Izany manohana famolavolana injeniera hanao ny mari multifaceted faritra izay afaka manatsara ny fahafaha-miasa sy ny fanatanterahana ny vokatra farany dingana tsy voafetra.
Tombony ny 5-Axe CNC fikosoham-bary
-Kalitao avo ambonin'ny farany : Tsy azo atao ny hamokatra avo-tsara machined faritra farany tamin'ny fampiasana fohy ho mpikapa amin'ny hafainganam-pandeha ambony fanapahana, izay mety hampihena ny hovitrovitra izay mitranga matetika rehefa lalina machining lavadavaka tamin'ny 3-mpiray dingana. Izany no mahatonga ny malamalama ambonin'ny aorian'ny machining farany.
Toerany marina : 5-mpiray niara fikosoham-bary sy ny machining lasa zava-dehibe raha ny vokatra vita dia tsy maintsy manaraka foana hentitra kalitao sy ny fampisehoana specifications.5-mpiray CNC machining ihany koa ny manala ny filàna hifindra ny asa maro workstations sombin eo, amin 'izany hampihena ny mety ho fahadisoana .
Short mitarika fotoana : Ny fahaiza-manao kokoa ny 5-mpiray milina famokarana vokatry nihena fotoana, izay handika ho fotoana fohy fitarihana ho an'ny famokarana raha oharina amin'ny 3-mpiray milina.
aluminium maty mandatsaka faritra , aluminium fanariana, maty fanariana faritra , nanarato teny amin'ny faritra , aluminium maty fanariana , aluminium maty niampatra,